Ojiji nke Barium Hydroxide
Barium Hydroxide ngwaahịa nwere Barium Hydroxide octahydrate na Barium Hydroxide monohydrat.
Ka ọ dị ugbu a, ngụkọta ikike imepụta Barium Hydroxide octahydrate karịrị 30,000 MT, ikike ngụkọta nke Barium Hydroxide monohydrate bụ 5,000 MT, nke kachasị bụrụ ngwaahịa kristal granular. Na mgbakwunye, enwere obere powdery Barium Hydroxide monohydrate. Ike mmepụta nke Barium Hydroxide monohydrate ga-eru 10,000 MT, yabụ, a ga-agbasawanye ikike mmepụta nke Barium Hydroxide octahydrate otu a. Na China, a na-azụkarị octahydrate a na-akpọ Barium Hydroxide octahydrate na ụlọ ebe a na-ebupụ Barium Hydroxide monohydrate na mba ọzọ. Barium Hydroxide octahydrate na monohydrate bụ ngwaahịa Barium Salt abụọ nwere mmepe kachasị ọsọ na afọ ndị na-adịbeghị anya.
Barium hydroxide octahydrate bụ nke a na-ejikarị griiz barum, ọgwụ, plastik, rayon, iko na enamel ụlọ ọrụ akụrụngwa, ụlọ ọrụ mmanụ ala dị ka ngwa mgbakwunye ọtụtụ arụmọrụ, mmanụ a nụchara anụcha, sucrose ma ọ bụ dị ka mmiri dị nro. akụrụngwa nke Barium Hydroxide monohydrate.
A na-ejikarị Barium Hydroxide monohydrate eme ihe dị ka mgbakwunye maka mmanụ ọkụ ọkụ na-ere mmanụ n'ime mmanụ, plasticizer na compound stabilizer na ụlọ plastik. Barium Hydroxide monohydrate nwere obere ígwè (10 × 10-6 n'okpuru) nwekwara ike iji ya maka iko iko na ihe ndị na-eme ka foto.
A na-eji Barium hydroxide eme ihe dị ka ihe na-akpali akpali maka njikọ nke Phenolic Resin. Ihe mmeghachi omume nke polycondensation dị mfe ịchịkwa, nsị resin a kwadebere dị obere, ọgwụgwọ na-agba ọsọ ọsọ, ngwa ngwa dị mfe iwepu. Usoro onunu ogwu bu 1% ~ 1.5% nke phenol. A na-ejikwa ya dị ka ihe na-akpali akpali maka mmiri soluble urea gbanwetụrụ phenol - formaldehyde adhesive. Ihe a gwọrọ bu acha odo. Nri Barium fọduru na resin anaghị emetụta ihe onwunwe dielectric na nkwụsi ike kemịkal.
A na-eji Barium Hydroxide eme ihe dị ka nyocha nyocha, jikwa ya na nkewa na ọdịda nke sulphate na imepụta Barium Salt, mkpebi siri ike nke carbon dioxide na ikuku. Quantification nke chlorophyll. Nzacha anụcha na mmanụ anụmanụ na ihe oriri. Esi mmiri ọkụ Cleaner, Pesticides na roba ụlọ ọrụ.
Post oge: Feb-02-2021
Hydrosulfite De Sodium, Natrium Hydrosulfite, Calcium Bromide Anhydrous, Hydrosulfite, Calcium Bromide mmiri mmiri, Calcium Bromide Ngwọta,